Yiba Nokholo Uze ‘Ubone’ Izithembiso ZikaThixo Zizaliseka
‘Abazange bayifumane inzaliseko yazo izithembiso, kodwa bazibona zisekude.’—HEBHERE 11:13.
Sisiphi isipho esisinikwe nguThixo esisinceda sibe nokholo?
Sazi njani ukuba abantu bamaxesha eBhayibhile babenokholo yaye bekwazi ukuba nomfanekiso-ngqondweni wezinto ababezithenjiswe nguThixo?
Kutheni kuyinto entle ukuthetha ngekamva esilithenjiswe nguYehova?
1. Kusinceda ngantoni ukuba nomfanekiso-ngqondweni wezinto esingazange sazibona ngaphambili? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.)
UYEHOVA usivave ngesipho sokukwazi ukuba nomfanekiso-ngqondweni wezinto esingazange sazibona ngaphambili. Oku kusinceda silangazelele izinto ezintle esiza kuzifumana kwikamva size senze namacebo okusinceda singangeni engxakini. UYehova uyayazi into eza kwenzeka kwikamva ibe usichazela nezinye zezinto esiza kuzifumana. Nangona singekaziboni okwangoku, siyakwazi ukuba nomfanekiso-ngqondweni wazo size sibe nokholo lokuba ziza kwenzeka.—2 Korinte 4:18.
2, 3. (a) Kungasinceda ngantoni ukuba nomfanekiso-ngqondweni? (b) Yiyiphi imibuzo esiza kuyiphendula kweli nqaku?
2 Kakade ke, ngamanye amaxesha sikhe siphuph’ emini. Ngokomzekelo, intombazana encinci isenokuba nomfanekiso-ngqondweni wayo ikhwele ibhabhathane. Kakade ke, yintsom’ emini leyo! Noko ke, uHana unina kaSamuweli waba nomfanekiso-ngqondweni wezinto ezazinokwenzeka. Wayesoloko ecinga ngemini awayeza kusa ngayo unyana wakhe emnqubeni ukuze asebenze nababingeleli. Eli yayingelophupha nje! Yinto awayezixelele ukuba uza kuyenza. Ukusoloko ecinga ngaloo mini kwanceda uHana wangagungqi kwisithembiso awayesenze kuYehova. (1 Samuweli 1:22) Xa sicinga ngezithembiso zikaYehova, siba nomfanekiso-ngqondweni wezinto eziza kwenzeka nokuba sele kumnyam’ entla.—2 Petros 1:19-21.
3 Kwabanceda ngantoni abantu bakaYehova bamandulo ukusoloko becinga ngezithembiso zakhe? Kutheni kukuhle ukuba nathi sibe nomfanekiso-ngqondweni wobomi xa kuzaliseka izithembiso zikaThixo?
UKHOLO LWABO LOMELELA NANGAKUMBI XA BABECINGA NGEKAMVA
4. Kwakutheni ukuze uAbheli akwazi ukuba nomfanekiso-ngqondweni wekamva eliqaqambileyo?
4 UAbheli waba ngumntu wokuqala ukuba nokholo kwizithembiso zikaYehova. Wayesazi ukuba emva kokuba uAdam noEva bonile, uYehova wathi kwinyoka: “Ndiya kubeka ubutshaba phakathi kwakho nomfazi naphakathi kwembewu yakho nembewu yakhe. Yona iya kukutyumza intloko uze wena uyityumze isithende.” (Genesis 3:14, 15) UAbheli wayengayazi ncam indlela eyayiza kwenzeka ngayo le nto. Kodwa ke inoba wayicinga kaninzi le nto yayithethwe nguThixo. Mhlawumbi wayezibuza ukuba, ‘Inoba ngubani bethu lo uza kwenzakaliswa yinyoka aze ancede abantu bafezeke kwakhona?’ UAbheli wayenokholo lokuba yonke into ethenjiswe nguYehova iza kwenzeka, ibe xa wenza umnikelo, uYehova wawamkela.—Funda iGenesis 4:3-5; namaHebhere 11:4.
5. Kwamnceda ngantoni uEnoki ukucinga ngekamva?
5 Enye indoda eyayinokholo olomeleleyo kuThixo nguEnoki. Wayephila nabantu abangendawo ababethetha “izinto ezothusayo” ngoThixo. Kodwa ke uEnoki wayenesibindi ibe washumayela ngezinto awayezithunywe nguThixo. Waxelela abantu ukuba uYehova uza kubatshabalalisa abangendawo. (Yude 14, 15) Wancedwa yintoni? Mhlawumbi uEnoki wayenomfanekiso-ngqondweni wehlabathi xa wonke umntu ekhonza uYehova.—Funda amaHebhere 11:5, 6.
6. Emva koMkhukula, yintoni ekusenokwenzeka ukuba uNowa wacinga ngayo?
6 UNowa wayenokholo kuYehova, ngoko ke akazange atshabalale ngoMkhukula. (Hebhere 11:7) Ekubeni wayenokholo, uNowa wabingelela ngezilwanyana kuYehova. (Genesis 8:20) Emva koMkhukula, abantu baqala apho babeyeke khona ukuba babi. UNimrod waqalisa ukulawula ibe wafaka abantu umoya wezikhova ukuze bavukele uYehova. (Genesis 10:8-12) Kodwa uNowa yena waqhubeka enokholo olomeleleyo. NjengoAbheli, naye wayeqinisekile ukuba ngenye imini uThixo uza kusisiphula neengcambu isono nokufa. Kusenokwenzeka ukuba uNowa wayenomfanekiso-ngqondweni wehlabathi xa kungekho balawuli bakhohlakeleyo. Nathi sifanele sibe nomfanekiso-ngqondweni welo xesha ekusele kumbovu ukuba lifike!—Roma 6:23.
BABECINGA NGEXESHA LAXA IZITHEMBISO ZIKATHIXO ZIZALISEKA
7. Liliphi ikamva ababenomfanekiso-ngqondweni walo uAbraham, uIsake noYakobi?
7 UAbraham, uIsake noYakobi babenomfanekiso-ngqondweni wekamva elimangalisayo. UYehova wabathembisa ukuba abantu bazo zonke iintlanga babeya kuzisikelela “ngembewu” yabo. (Genesis 22:18; 26:4; 28:14) UThixo wayebathembise nokuba iintsapho zabo zaziza kuba luhlanga olukhulu zize zihlale kwiLizwe elihle Lesithembiso. (Genesis 15:5-7) Ekubeni uAbraham, uIsake noYakobi babesazi ukuba izithembiso zikaYehova ziyinyani, babenomfanekiso-ngqondweni ocacileyo weentsapho zabo seziphila kwelo lizwe. Eneneni, ukususela oko uAdam noEva bonayo, uYehova ebebanceda abakhonzi bakhe abathembekileyo baqonde indlela abantu abaza kuba yiyo xa befezekile.
8. Yintoni eyanceda uAbraham wanokholo olomeleleyo waza wathobela?
8 Ngenxa yokholo olomeleleyo awayenalo uAbraham, wayemthobela uYehova naxa izinto zazingahambi kakuhle. UAbraham nabanye abakhonzi abathembekileyo bakwazi ukuba nomfanekiso-ngqondweni wezithembiso zikaYehova nangona ezinye zazo zazaliseka sebafayo. IBhayibhile ithi: “Bazibona zisekude, bazithakazelela.” (Funda amaHebhere 11:8-13.) UAbraham wayesazi ukuba uYehova wayesoloko ezigcina izithembiso zakhe, ngoko wayeqinisekile ukuba nezithembiso zexesha elizayo wayeza kuzizalisekisa zonke.
Abantu kumaxesha okubhalwa kweBhayibhile babekhangele phambili kwixesha laxa uYehova norhulumente wakhe beza kulawula ngonaphakade emhlabeni
9. Ukukholelwa kuka-Abraham kwizithembiso zikaThixo kwamnceda njani?
9 Ekubeni uAbraham wayezikholelwa izinto awayezithenjiswe nguYehova, waqhubeka esenza izinto ezazifunwa nguye. Ngokomzekelo, washiya ikhaya lakhe eUre waza wangumphambukeli kwizixeko ngezixeko ubomi bakhe bonke. Wayesazi ukuba izixeko ezazimngqongile zaziza kutshabalala kuba abalawuli bazo babengamkhonzi uYehova, ibe akazange ahlale ngokusisigxina kuzo. (Yoshuwa 24:2) Kunoko, wayekhangele phambili kwixesha laxa uYehova nobukumkani bakhe beza kulawula ngonaphakade emhlabeni. Obu bukumkani ‘sisixeko esineziseko zokwenene, sixeko eso esimakhi nomenzi waso unguThixo.’ (Hebhere 11:10) UAbraham, uAbheli, uEnoki, uNowa nabanye babekholelwa kuvuko. Nanini na becinga ngokuphila ngonaphakade emhlabeni omhle, ukholo lwabo kuYehova lwalusomelela nangakumbi.—Funda amaHebhere 11:15, 16.
10. Kwamnceda ngantoni uSara ukuba nombono wezinto zexesha elizayo?
10 USara, umfazi ka-Abraham, wayenokholo olomeleleyo kwizithembiso zikaYehova. Kwanaxa wayesele eneminyaka eyi-90 engenabantwana, wayekhangele phambili ekubeni nomntwana. USara wayenawo nombono wabantwana bakhe besiba luhlanga olukhulu. (Hebhere 11:11, 12) Yintoni eyayimqinisekisa? Kaloku uYehova wathi kumyeni wakhe: “Ndiza kumsikelela ndize ndikunike unyana ngaye; yaye ndiza kumsikelela abe ziintlanga; kuya kuphuma ookumkani bezizwana kuye.” (Genesis 17:16) Kanye njengoko uYehova wayethembisile, uSara waba nonyana onguIsake. Lo mmangaliso wamqinisekisa ukuba nezinye iinkcukacha zesi sithembiso sikaYehova zaziza kuzaliseka. Nathi sinokulomeleza ukholo lwethu ngokuba nombono wezinto ezintle uYehova asithembise zona.
WAYESOLOKO ECINGA NGOMVUZO
11, 12. Yintoni eyabangela uMoses waya emthanda nangakumbi uYehova?
11 UMoses naye wayenokholo kwizithembiso zikaYehova. Wayekhuliswe njengenkosana eYiputa. Kodwa ngenxa yokuba wayemthanda uYehova ngaphezu kwayo nantoni na, uMoses akazange azifunele ubutyebi negunya. Wayefundisiwe ngabazali bakhe abangamaHebhere ngoYehova nangesithembiso sokuba wayeza kukhulula amaHebhere asebukhobokeni, aze awanike iLizwe Lesithembiso. (Genesis 13:14, 15; Eksodus 2:5-10) Okukhona uMoses ecinga ngezi zithembiso, kokukhona wayemthanda kakhulu uYehova.
12 IBhayibhile isixelela ngoko uMoses wayesoloko ecinga ngako: “Ngokholo uMoses, xa wayekhulile, wala ukubizwa ngokuba ungunyana wentombi kaFaro, enyula ukuphathwa kabuhlungu kunye nabantu bakaThixo kunokuziyolisa ngesono okwexeshana, ngenxa yokuba walubalela ungcikivo lukaKristu ekuthini lububutyebi obukhulu ngakumbi kunobuncwane baseYiputa; kuba wayekhangele ngenyameko emvuzweni.”—Hebhere 11:24-26.
13. Kwamnceda ngantoni uMoses ukusoloko ecinga ngezithembiso zikaYehova?
13 Kumele ukuba uMoses wacingisisa ngesithembiso sikaYehova sokukhulula amaHebhere ebukhobokeni. Njengabanye abakhonzi bakaYehova, wayesazi ukuba uYehova uza kubavusa bonke abalele ekufeni. (Yobhi 14:14, 15; Hebhere 11:17-19) Ngoko ke, wayeyazi indlela uYehova abathanda ngayo abantu. Oku kwamenza wamthanda ngakumbi uYehova lwaza nokholo lwakhe lwathi chatha. Kwamnceda wamkhonza uYehova ubomi bakhe bonke. (Duteronomi 6:4, 5) Naxa uFaro wayefuna ukumbulala, uMoses zange oyike. Wayesazi ukuba uYehova wayeza kumvuza kwixesha elizayo.—Eksodus 10:28, 29.
YIBA NOMBONO WEZINTO EZIZA KWENZIWA BUBUKUMKANI BUKATHIXO
Ngaba unombono wakho usenza izinto uYehova akuthembise zona? (Jonga isiqendu 15)
14. Baphupha ngantoni abanye abantu ngekamva?
14 Abantu abaninzi xa becinga ngekamva, baphupha ngezinto ezingasoze zenzeke. Ngokomzekelo, abanye abangamahlwempu baphupha ngokuba zizityebi ezingaswele nto. Kodwa iBhayibhile ithi kwihlabathi likaSathana kuya kusoloko kukho ‘iinkathazo nezinto ezenzakalisayo.’ (INdumiso 90:10) Ukanti abanye banombono worhulumente wabantu elungisa iingxaki ezikhoyo. Kodwa iBhayibhile ithi ngurhulumente kaThixo kuphela onokwenza oko. (Daniyeli 2:44) Ibe abantu abaninzi bacinga ukuba ihlabathi alisoze litshintshe. Kodwa iBhayibhile ithi uThixo uza kulitshabalalisa eli hlabathi lingendawo. (Zefaniya 1:18; 1 Yohane 2: 15-17) Abo baphupha ngezinto ezichaseneyo nenjongo kaYehova, baza kudana.
15. (a) Kusinceda ngantoni ukucinga ngezinto uThixo asithembise zona? (b) Yeyiphi eyona nto ukhangele phambili kuyo?
15 UYehova usithembise izinto ezintle zexesha elizayo. Siyavuya xa sicinga ngelo xesha, ibe sifumana amandla okuqhubeka simkhonza. Ngaba sowunawo umbono wezinto uYehova akuthembise zona, enoba uza kuba lapha emhlabeni okanye ezulwini? Ukuba unethemba lokuphila ngonaphakade apha emhlabeni, yiba nombono wakho nezihlobo zakho nisenza lo mhlaba ube yiparadesi entle. Abantu abakhokelayo kulo msebenzi bakukhathalele. Ibe wonke umntu ohlala naye uthanda uYehova njengawe. Yiba nombono wakho usempilweni, udlamkile yaye ungenaxhala lanto. Wonwabile ngenxa yokuba usebenzisa iziphiwo onazo ukunceda abanye bamzukise uYehova. Mhlawumbi unceda nabo bavusiweyo ukuba bamazi. (Yohane 17:3; IZenzo 24:15) Ukucinga ngezi zinto akulophupha nje. Zonke ziza kwenzeka kuba iBhayibhile itsho njalo.—Isaya 11:9; 25:8; 33:24; 35:5-7; 65:22.
THETHA NGEZINTO ONOMNQWENO WOKUZIBONA
16, 17. Kutheni kubalulekile ukuthetha ngezinto ezintle uYehova asithembise zona?
16 Xa sincokola nabazalwana bethu ngezinto esikhangele phambili kuzo kwihlabathi elitsha, siyancedana ukuze sibe nomfanekiso-ngqondweni ocacileyo wekamva. Kakade ke, asiyazi ncam into esiza kuyenza kwihlabathi elitsha. Kodwa xa sithetha ngezinto esikhangele phambili kuzo, sibonisa ukuba sinokholo kwizithembiso zikaYehova. Ngale ndlela, siyakhuthazana ekukhonzeni uYehova kula maxesha anzima, njengoPawulos nabazalwana bakhe baseRoma.—Roma 1:11, 12.
17 Xa ucinga ngekamva uYehova alithembisileyo, awunakusoloko ucinga ngeengxaki onazo. Ngesinye isihlandlo, uPetros wayekhathazekile waza wathi kuYesu: “Khangela! Sishiye zonke izinto saza sakulandela; yintoni okunene esiya kuyifumana?” UYesu wayefuna uPetros nabanye abafundi bacinge ngezinto ezintle ababeza kuzenza kwixesha elizayo. Ngoko wathi kubo: “Xa uNyana womntu ehlala phantsi kwitrone yakhe ezukileyo, nina eniye nandilandela niya kuhlala kwiitrone ezilishumi elinesibini, nigweba izizwe ezilishumi elinesibini zakwaSirayeli. Kwaye wonk’ ubani oshiye izindlu okanye abantakwabo okanye oodade okanye uyise okanye unina okanye abantwana okanye imihlaba ngenxa yegama lam uya kwamkela izihlandlo ezininzi ngakumbi yaye uya kudla ilifa ubomi obungunaphakade.” (Mateyu 19:27-29) Ngoko, uPetros nabanye abafundi baba nombono wabo belawula noYesu emazulwini, benceda abantu abathobekileyo ukuba bafezeke.
18. Kusinceda ngantoni ukuba nombono kaThixo ezizalisekisa izithembiso zakhe?
18 Sifundile ngezinto ezanceda abakhonzi bakaYehova banokholo olomeleleyo. UAbheli waba nomfanekiso-ngqondweni wekamva elihle elithenjiswe nguYehova, yaye ngenxa yokuba nokholo, wathandwa nguye. UAbraham waba nombono wexesha laxa izithembiso zikaYehova ‘ngembewu’ zizaliseka, ngenxa yoko wamthobela kwanaxa kwakunzima kakhulu. (Genesis 3:15) UMoses wayekhangele phambili kumvuzo awayewuthenjiswe nguYehova, yaye oku kwambangela wamthanda waza wathembeka kuye. (Hebhere 11:26) Xa sisiba nombono wexesha laxa uYehova ezizalisekisa zonke izithembiso zakhe, ukholo lwethu luyomelela size simthande ngakumbi. Kwinqaku elilandelayo siza kufunda ngenye indlela okusinceda ngayo ukuba nomfanekiso-ngqondweni wezinto.
“Bazibona” izinto ezazithenjisiwe: UAbraham nabanye baba nomfanekiso-ngqondweni wezithembiso zikaYehova. Bacingisisa ngazo yaye babeqinisekile ukuba ziza kwenzeka izinto uYehova azithembisileyo. Nathi sinokuba nomfanekiso-ngqondweni wezinto esiza kuzenza xa kulawula ubukumkani bukaYehova
Ukuba nokholo kuThixo nakwizithembiso zakhe: Siqinisekile ukuba kuyinyani oko sikukholelwayo, nangona singekakuboni. Yaye asizithandabuzi izithembiso zikaThixo
IMBONISELO—EFUNDWAYO Meyi 2015